Naftood haligeyaal Liibiya ku sugnaa oo Somali ku jirto oo Talyaanigu qaaday: SAWIRO - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Naftood heligeyaal Somali ku jirto ayaa hay’ad qaxooti ka qaaday dalka dagaalku ka socdo ee Liibiya loona daad gureeyay dhinaca Talyaaniga. Dadka la qaaday ayaa ku sugnaa meel halisa oo Liibiya ka tirsan.
Waxay ka soo jeedaan dalalka Somaliya, Eritariya, Suudaan iyo Itoobiya. Waxay dadkani gaarayaan il;aa 150 qof oo ay ku jiraan 65 caruura. Masul u Hadley hay’adda qaxootiga ayaa sheegay in si deg dega loogu baahan yahay daad gurayn oo intani ku filnayn.
Dagaalka u dhexeeya kooxaha Liibiya ayaa mudooyinkan hakad galay ayado lagu Jiro bisha barakaysan ee Ramadaan. Waxana dagaalku u dhexeeya argagixisada gaalaynta Daacish ama kuwa la magaca iyo jeneraal Khaliifa oo dhinaca.
Maaha markii ugu horeysay oo la qaado naftood haligeyaal jooga Liibiya oo inta badan lagala daalay kufsi, iyo jirdil joogta ah. Talaabadan ayaan aad loo amaanin taas oo dhiirigelnaysa in dhalinyaro badan naftoda soo haligaan.
Sidoo kale qaadistan ayaa imaanaysa xilli Somalida qaxootiga ku ahayd Yaman qaarkood shalay laga soo dejiyay magaalada Berbera.